राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ नेपालका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले टेलिफोन गर्नुभयो । उहाँले निकै खुशी हुँदै वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले राहतस्वरुप १० हजार रुपैयाँ पाउने कुरा लगभग पक्का भएको कुरा एकै श्वासमा व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको त्रास फैलिरहेको छ । जसको कारण मुलुक लक–डाउनमा गएको छ । यस विषम परिस्थितिमा विविध कारणवश वृद्धाश्रममा जीवन बिताइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ३ महिनाको राहतस्वरुप सरकारले एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्दैछ । यसका लागि मुलुक लक–डाउनमा गएको भएपनि आफू निरन्तररुपमा सरकारी पदाधिकारीको सम्पर्कमा रहेको कुरा ख्यातीप्राप्त कलाकार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले यस सत्काममा स्वयं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्बत गुरुङको प्रत्यक्ष पहल रहेको र अन्य मन्त्री पनि सकारात्मक रहनुभएको कुरा बताउनुभयो ।
यो रकम ज्येष्ठ नागरिकलाई रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पौष्टिक आहारा खानका लागि प्रदान गरिन लागेको बुझिएको छ । यो राहत रकम सम्बन्धी निर्णय हुन बाँकी छ । यसर्थ सरकारले यथाशीघ्र निर्णय गरी राहत रकम वितरण गरोस् भनी आग्रह गर्न चाहन्छु ।
केही महिनापूर्व यस पंक्तिकारले महासंघको आग्रहमा मन्त्री पार्वत गुरुङको उपस्थितिमा आयोजित एक बृहत् कार्यक्रममा कसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा मुलुकभरकै वृद्धाश्रम र ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस पंक्तिकारले अर्कोे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सो कार्यपत्रहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने र स्कूल र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा बुढेसकाल जिउने कला र उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्ने जिकीर गरिएको थियो ।
कार्यपत्रमा प्रत्येक पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने र एजिंगसम्बन्धी विज्ञ सेवा दिने राष्ट्रियस्तरको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता बताइएको थियो । यस अतिरिक्त कार्यपत्रमा हवाई जहाज, बस लगायतका सबै सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, प्लटिङ र अपार्टमेन्टमा १० प्रतिशत घडेरी र फ्ल्याट ज्येष्ठ नागरिकलाई क्रससब्सिडी अनुसार ५० प्रतिशत छुटमा दिनुपर्ने, एमफिल, पीएचडी गर्न पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्न बैंक र बीमाले अरुलाई सरह श्रृण र सुविधा दिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकवाटिका/पार्कको स्थापना गर्नुपर्ने, मुलुकभरका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृट योगदान गर्ने १० प्रतिभालाई बर्सेनि १० लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने जस्ता विषय समावेश भएका थिए । महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठको ठम्याइँमा हाल नेपाल सरकार ज्येष्ठ नागरिकका यी विषयमा सकारात्मक र गम्भीर हुँदै गएको परिणामस्वरुप हाललाई १० हजार रुपैयाँ राहत दिने चाजोपाजो मिल्दै गएको हो ।
भविष्यमा, कार्यपत्रमा इङ्गित गरिएका अन्य विषय सम्बोधन हुँदै जाने लक्षण देखिएको कुरा उहाँले बताइरहदा यो पंक्तिकार पनि खुशी हुनु स्वाभाविकै हो । यथार्थमा, ज्येष्ठ नागरिक मुलुकका निधि हुन्, यिनको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
नेपालमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन अनुसार ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ । यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या कूल जनसंख्याको ८.२६ प्रतिशत अर्थात् करीब ३० लाख छ । हाल विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिँदो कोरोना भाइरसको जोखिम तुलनात्मक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकमा हुने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि मधुमेह, हृदयरोग र उच्च रक्तचापबाट पीडित मानिसलाई अझ बढी खतरनाक हुनसक्ने जनाइएको छ । यसर्थ, वर्तमान परिस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकले अपनाउनुपर्ने सतर्कता र जिम्मेवार व्यक्ति, परिवार, पदाधिकारी र निकायले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपलव्ध गराउनु राहत र सहयोगका सम्बन्धमा महासंघका तर्फबाट महासचिव छत्रबहादुर प्रधानले १० बुँदे विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसर्थ वर्तमान स्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजर, हातधुने साबुन लगायतका सामग्री स्थानीय सरकारले घरघरमै पुर्‍याइदिनुपर्छ ।
यो संंक्रमणबाट बच्ने हालसम्मको सरल र सबल विधि भनेकै घरबाट बाहिर ननिस्किने हो । यसर्थ आम ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट बाहिर नजान अपिल गर्दछु । तथापि यस अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको औषधि किन्नुपर्ने हुन सक्छ । अन्य कुनै अत्यावश्यक कामले घरबाट बाहिर नगई नहुने स्थिति पनि पैदा हुनसक्छ । यस अवस्थामा परिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई घर बाहिर जान नदिन उहाँहरूको आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ । साथै, परिवारले ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक खानपिन, सरसफाईसहित नियमित औषधि सेवन गराई विशेष स्याहार–सुसार गर्नुपर्छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा वृद्धाश्रम सञ्चालकहरूले ज्येष्ठ नागरिकको आपसी भेला गर्न दिनु हुँदैन । हाललाई भजनकीर्तन पनि स्थगित गर्नुपर्छ । सामूहिकरूपमा गर्ने गरिएका योगा समेत बन्द गर्नुपर्छ । यी सबै कार्य ज्येष्ठ नागरिकले आ–आप्mनै कोठामा गर्नुपर्छ । वृद्धाश्रममा ज्येष्ठ नागरिकले प्रयोग गर्ने थाल, कचौरा, गिलास, चम्चा जस्ता सामग्री सम्भव भएसम्म व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा केन्द्र सञ्चालन भइआएकोमा ती समेत बन्द गर्नुपर्छ । हाल वृद्धाश्रममा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकको नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीले नियमित चेकजाच गर्नुपर्छ र अरुले पनि सम्भव भएसम्म चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । यसका लागि पालिकाले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।
यस स्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई रुघाखोकीबाट जोगाउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले तातोपानी पिउने, अदुवा बेसारपानी नियमित पिउने, न्यायो लुगा लगाउने लगायतको काम गर्नुपर्छ । यदि उच्च ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिएमा तत्कालै अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । तथापि हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसका ४ जना संक्रमित देखिएकोमा १ जना निको भइसकेको र अरु ३ जनाले पनि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकाले अधैर्य हुने, आत्तिने, डराउनेभन्दा पनि सजगता अपनाउने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । सबै ज्येष्ठ नागरिक स्वस्थ र खुशी रहनुहोस्, शुभकामना !
(बास्कोटा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ नेपालका सल्लाहकार समेत हुन् ।)
निर्वाचनमा कस्तो हुनुपर्छ कर्मचारीको भूमिका ? पूर्वस...
सुस्वास्थ्यका लागि योग र नेपाली समाजमा यसका थप आया...
प्रतिनिधि सभा विघटनको रहस्य : ओलीको सनक अनि प्रचण्ड...